बिचरा कम्रेडहरु : प्रतिगमनलाई अग्रगमन भन्नें पो कसरी ?
राजु सापकोटा, असत्यलाई सत्य । प्रतिगमनलाई अग्रगमन । निरङ्कुशलाई उदारवादी । आदी इत्यादि । अझ भनौं कालोलाई सेतो अनि सेतोलाई कालो । सफेद झुट बोल्नुपर्ने परिबन्धमा फँसे बिचरा कम्रेडहरु । दयामाया कस्ले देखाउनु । एउटै घर बनाएर मायाप्रेम गरिरहेका बेला...
सर्वोच्चको फैसला : ओलीलाई धक्का, प्रचण्डलाई फाईदा !
राजु सापकोटा, प्रतिनिधिसभा पुनःस्थपना र नेकपा नामको आधिकारीकता संबन्धि फैसला । सर्वोच्चका यि दुई शक्तिशाली फैसला जो आँफैमा ऐतिहासिक छन । जसका कारण मुलुकमा तरंग उत्पन्न भएको छ । यो सामान्य तरंग होईन । न त यसलाई सामान्यीकरण नै गर्न...
“२ वर्षदेखि रंगशाला बारे प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराउन खोज्दा भेट्न पाइएन”
चितवन – चितवनको रामपुरमा देशकै पहिलो अन्तराष्ट्रिय स्तरको रंगशाला निर्माण हुँदैछ । धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेशनको अगुवाइमा गौतमवुद्ध अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाको काम धमाधम भइरहेको छ । तर पछिल्लो समय रंगशाला निर्माणका लागि आर्थिक संकट उत्पन्न भएको छ । घोषणा गरेकाहरुले समयमै...
राजु सापकोटा, भाग्यमानीको भूतै कमारो । भाग्यमा भएपछि डोकोमा पनि दुध अडिन्छ । आदि ईत्यादि । सम्पूर्ण लोकोक्ति कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवाको हकमा मिल्न गएको छ । एक ज्योतिषीका अनुसार देउवाको सात पटक प्रधानमन्त्री बन्ने योग छ । यो कुरा...
उत्सवमय जीवन जिउने एउटा कला हो प्रेम
कुशल लामिछाने, प्रेम के हो र कसलाई किन गरिन्छ प्रश्न नगर । जीवनलाई आदर गर, प्रेम गर। जीवनजत्तिको पवित्र, सुन्दर, उत्सवपूर्ण र प्रेमपूर्ण अरू चिज नै छैन।’ ओशोको इशारा हुनुपर्दछ- प्रेमको कुनै परिभाषा छैन। प्रेम कुनै सम्बन्ध पनि होइन।...
‘नमुना शिक्षा ठोरीको अभियान’ के पुरा भयो ?
सन्तोष श्रेष्ठ, नेपालको संविधान २०७२ ले आधारभूत तह र माध्यमिक तह बिद्यालय शिक्षा अहिले स्थानीय तहको मातहतमा आएको अवस्था छ । स्थानीय तहले स्थानीय सरकार संचालल ऐन २०७४ को धारा १०२ को स्थानिय कानुन बनाउने अधिकार प्रयोग गरी शिक्षा सम्बन्धि...
पुस २२ अर्थात म लगायत हाम्रो परिवारको खुसी लुटिएको दिन। म यो दिन न सम्झन चाहन्छु न बिर्सन नै सक्छु । माओको खोल भिरेर हत्याहिंसा लाई राजनीति भन्नेहरुको जत्थाको निशानामा परि २०५८-०९-२२ गते का दिन मेरो पुजनिय बुवा स्व:...
केशव सापकोटा, पोखरा- आजको दिन अलि बेग्लै छ,घाम झुल्किनु भन्दा अघि उठेको छ कृष्णप्रसाद नुहाइ धुवाइ सकेर आज त भजन पो गाउन थाल्यो उ।आज मौसम सफा छ ,आकाश खुलेको छ,न घाम न पानी अति रमाइलो छ आज!एक नजर उदाउँदो सुर्य...
कोभिड–१९ को अचुक औषधी : उपवास
डा. हेमराज कोइराला, विश्व व्यापि महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाईरस रोग (कोभिड–१९)को औषधि एवं भ्याक्सिन बनाउनका लागि संसारका अनेकै प्रयोगशालामा विभिन्न अनुशंधानहरू भईरहेका छन। तथापि यो रोगको कुनै खास औषधी एवं भ्याक्सिन बन्न सकेको छैन। साथसाथै आज पुरा विश्व यस...
होमनाथ तिमल्सिना, शुरुमा तपाईहरुलाई म एउटा तथ्य प्रस्तुत गर्न चाहन्छु । सिन्धुपाल्चोक घर भएकी एक महिला काठमाडौँ नया बसपार्कमा मरणासन्न अवस्थामा भेटिनुभयो । हेर्दा गर्भवती झैँ देखिनुहुन्थ्यो । उहाँको पेट ठुलो थियो । मानवसेवा आश्रमको टोलीले उद्दार गरी उपचारका लागि...